समाचार - के सामग्री धातु लेजर काट्ने मेसिन को लागी उपयुक्त छ
कुन सामग्री धातु लेजर काट्ने मेसिन को लागी उपयुक्त छ
के सामग्री धातु लेजर काट्ने मेसिन को लागी उपयुक्त छ
धातु को जन्म लेजर काट्ने मेसिन मुख्य रूपले काम गर्ने दक्षता र सटीकता काट्ने सुधार गर्न को लागी हो। तर उच्च दक्षता र उच्च परिशुद्धता मानव अपरेशन के हासिल गर्न सक्छन् बाट टाढा छन्।
समाज को प्रगति संग, अधिक र अधिक उन्नत टेक्नोलोजी नाम को उपयोग को क्षेत्र मा लागू गरीन्छ। उदाहरण को लागी, लेजर पछिल्लो शताब्दी मा साधारण मानिसहरु को लागी एक अनौठो र रहस्यमय कुरा हो। अब, टेक्नोलोजी को विकास संग, लेजर धेरै उद्योगहरुमा प्रयोग गरीएको छ। आज, ती सामग्रीहरु को लागी उपयुक्त छन् छलफल गरौं लेजर काट्ने मेसिन.
1. कार्बन स्टील प्लेट काट्ने:
Jiatai लेजर काट्ने प्रणाली 20 मिमी को नजिक कार्बन स्टील प्लेट को अधिकतम मोटाई कटौती गर्न सक्नुहुन्छ, र पातलो प्लेट को भट्ठा को बारे मा 0.1 मिमी को लागी संकुचित गर्न सकिन्छ। लेजर काटन कम कार्बन इस्पात को गर्मी प्रभावित क्षेत्र धेरै सानो छ, र काट्ने संयुक्त फ्लैट, चिकनी र राम्रो लम्बाइ छ। उच्च कार्बन इस्पात को लागी, लेजर काट्ने किनारा को गुणवत्ता कम कार्बन स्टील को तुलना मा राम्रो छ, तर यसको गर्मी प्रभावित क्षेत्र ठूलो छ।
2. स्टेनलेस स्टील काट्ने:
लेजर काट्ने स्टेनलेस स्टील पाना काट्न सजिलो छ। उच्च शक्ति फाइबर लेजर काट्ने प्रणाली संग, स्टेनलेस स्टील को अधिकतम मोटाई 8mm पुग्न सक्छ।
3. मिश्र धातु इस्पात प्लेट काट्ने:
धेरै मिश्र धातु इस्पात लेजर द्वारा काट्न सकिन्छ, र किनारा काटने को गुणस्तर राम्रो छ। तर उपकरण इस्पात र उच्च टंगस्टन सामग्री संग तातो मरने इस्पात को लागी, लेजर काट्ने बेला कटाई र लावा स्टिकिंग हुनेछ।
4. एल्युमिनियम र मिश्र धातु प्लेट काट्ने:
एल्युमिनियम काट्ने पिघ्ने काटने सम्बन्धित छ। राम्रो काटन गुणस्तरीय सहायक ग्यास संग काट्ने क्षेत्र मा पिघलाएको सामग्री उडाएर प्राप्त गर्न सकिन्छ। वर्तमान मा, एल्युमिनियम प्लेट काट्ने अधिकतम मोटाई 3mm छ।
5. अन्य धातु सामाग्री काट्ने:
तामा लेजर काटन को लागी उपयुक्त छैन। यो धेरै पातलो छ। टाइटेनियम, टाइटेनियम मिश्र र निकल मिश्र धातु को अधिकांश लेजर द्वारा काट्न सकिन्छ।